किन हुँदैछ माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता ? — News of The World
किन हुँदैछ माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता ?
संसार न्यूज संवाददाताआश्विन १६, २०७४
१६ असोज, काठमाडौं । अन्ततः नेकपा (माओबादी केन्द्र) र नेकपा(एमाले) बिच आगामी संघ र प्रदेशको चुनाबमा कार्यगत एकता सहित जाने तयारी भएको छ । केहि दिन अघि नेकपा एमालेका नेता माधब कुमार नेपाल र योगेश भट्टराईले सार्बजनिक रुपमा माओबादी केन्द्रसंग एकता गर्ने कुरा सार्बजनिक रुपमा बताए लगत्तै नेकपा( एमाले) हिजो मात्रै वार्ताकोल ढोका खोलेको थियो भने आज माओबादी केन्द्रको केन्द्रिय सचिबालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्र्टी (माओवादी केन्द्र)की प्रबक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिएकी छन् । भुषालका अनुसार उक्त पार्टीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) बीचको पार्र्टी एकता र आसन्न संघ एवं प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ ।
सोमबार पार्र्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठक आसन्न निर्वाचनमा तालमेल र नेकपा (एमाले) सँग पार्टी एकताका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । बैठकले एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको हो । नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग आवश्यक परामर्शपछि एकता र तालमेलबारे अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तिम निर्णय लिने पार्टी प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिईन् ।
माओबादी श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हिजो मात्र एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बिच ओली निबास बालकोटमा एक घण्टा एक्ला एक्लै छलफल भएको थियो । छलफल भएको भोलिपल्टै माओवादीले यस्तो निर्णय गरेकोछ । एमाले र माओवादी सुत्रका अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपतिको सवालमा दुई पार्टीहरु नजिकिएका हुन् ।